Shirka Wada-tashiga Puntland oo Garoowe ka furmaya
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun adag ku riday Dable Xoogga dalka Cabdiraxmaan Cabdulle Hilowle oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Cabdiraxmaan ayaa waxaa waxaa loo heystaa inuu dad shacab ah dil iyo dhaawac ugu geystay gobolka Shabeelaha Hoose.
Askariga la xukumay ayaa waxaa lagu soo eedeeyey inuu dilay Allaha U naxariistee Marxuum Xuseen Axmed Cabdulle, sidoo kalena uu dhaawacay Yaasiin Geedow Xuseen kadib markii ay ka biya diideen inuu ku fasho Beer uu lahaa oo ku taalla magaalada Buullo Mareer ee gobolka Shabeelaha Hoose, 31-k October sanadkii la soo dhaafay ee 2019-kii.
Eedeysanaha ayaa waxaa seddexdii November ee sanadkii hore xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku wareejiyey taliska ciidanka qeybta ururka 6-aad, wuxuuna xafiiska isla xilligaas weydiistay garsoorka in loo gudbiyo xabsiga dhexe ee Xamar.
Xukunsanaha ayaa sidoo kale haatan heysta fursad 30-cisho ah oo uu ku qaadan rafcaan xukunka kadib.